တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ဂျပန်အစိုးရ၏ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူး ကိုယ်စားလှယ်နှင့် နီပွန်ဖောင်ဒေးရှင်းဥက္ကဋ္ဌ H.E. Mr. Yohei SASAKAWA အား လက်ခံတွေ့ဆုံ » ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ ၊ နိုင်ငံတော်ကောင်စီဝင်နှင့် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Mr.Wang Yi ဦးဆောင်သောကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေး၊ ထုံးဘိုမြို့ရှိ နို့စားနွားမွေးမြူရေးစီမံကိန်း နှင့်နန်းမြို့တွင်းရှိ ရှေးဟောင်းအမြောက်ပြတိုက် ဆောက်လုပ်နေမှုများအား ကြည့်ရှုစစ်ဆေးပြီး စကျင်ကျောက်တော်ကြီးအား မြတ်စွာဘုရား၏ ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်မြတ်ကြီးအဖြစ် ထုဆစ်ကိုးကွယ်ရန်ဆောင်ရွက်နေမှုများအား သွားရောက်ကြည့်ရှု (ရုပ်သံသတင်း)
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၊ နိုင်ငံတော်ကောင်စီဝင်နှင့် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Mr. Wang Yi နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေး
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ထုံးဘိုမြို့ရှိ နို့စား နွား မွေးမြူရေး စီမံကိန်းနှင့် နန်းမြို့တွင်းရှိရှေးဟောင်းအမြောက်ပြတိုက် ဆောက်လုပ်နေမှုများအားသွား ရောက်ကြည့် ရှုစစ်ဆေး၊ စကျင်ကျောက်တော်ကြီးအား မြတ်စွာဘုရား၏ဗုဒ္ဓ ရုပ်ပွားတော်မြတ်ြ ကီးအဖြစ် ထုဆစ်ကိုး ကွယ်ရန်ဆောင်ရွက်နေမှုအား သွားရောက်ကြည့်ရှု
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မဟာသရေစည်သူ မင်းအောင်လှိုင် စစ်တက္ကသိုလ်ဗိုလ်လောင်းသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၆၁) သင်တန်းဆင်းဂုဏ်ပြုစစ်ရေးပြအခမ်းအနား တက်ရောက်မိန့်ခွန်းပြောကြားခြင်းနှင့် သင်တန်းဆင်းဂုဏ်ပြုညစာ စားပွဲသို့ တက်ရောက်ချီးမြှင့်ခြင်း (ရုပ်သံသတင်း)
စစ်တက္ကသိုလ် ဗိုလ်လောင်းသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၆၁)သင်တန်းဆင်း ဂုဏ်ပြုညစာစားပွဲ အခမ်းအနား ကျင်းပ
နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံတွင်ဖြစ်စေ၊ အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးတွင်ဖြစ်စေ ခေါင်းဆောင်များ၏ အခန်းကဏ္ဍ သည် အလွန်အရေးကြီးသဖြင့် မှန်ကန်သည့် ခေါင်းဆောင်မှု၊ ဥပဒေနှင့် ညီညွတ်သောအမိန့်၊ မျှတသော ဆုံးဖြတ်ချက်များဖြင့် မိမိကွပ်ကဲရသည့်တပ်ဖွဲ့ကို တိုးတက်အောင်မြင်ရန် စနစ်တကျ ဦးဆောင် သွားကြရမည်ဖြစ်
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် စစ်တက္ကသိုလ် ဗိုလ်လောင်းသင်တန်း အမှတ်စဉ် (၆၁) သင်တန်းဆင်းဂုဏ်ပြုစစ်ရေးပြ အခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်မိန့်ခွန်းပြောကြား
ဖေဖော်ဝါရီ ၁၅၊ ၂၀၁၉ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၅၊ ၂၀၁၉
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ဂျပန်အစိုးရ၏ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူး ကိုယ်စားလှယ်နှင့် နီပွန်ဖောင်ဒေးရှင်းဥက္ကဋ္ဌ H.E. Mr. Yohei SASAKAWA အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
နေပြည်တော်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၅
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်သည် ဂျပန်အစိုးရ၏ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးကိုယ်စားလှယ်နှင့် နီပွန်ဖောင်ဒေးရှင်းဥက္ကဋ္ဌ H.E. Mr. Yohei SASAKAWA အား ယနေ့မွန်းလွဲပိုင်းတွင် နေပြည်တော်ရှိဘုရင့်နောင်ရိပ်သာဧည့်ခန်းမ ဆောင်၌ လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။
အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲသို့ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့်အတူ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး(ကြည်း)မှ ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ဆန်းဦး၊ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး စိုးထွဋ်နှင့် ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မောင်မောင်အေးတို့ တက်ရောက် ကြပြီး ဂျပန်အစိုးရ၏ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးကိုယ်စားလှယ်နှင့် နီပွန်ဖောင်ဒေးရှင်းဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူနှင့်အတူ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဂျပန်နိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Ichiro Maruyama နှင့် တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက် ကြသည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံရာတွင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးရရှိရန်အတွက် ဂျပန်နိုင်ငံ မှ ပါဝင်ကူညီဆောင်ရွက် ပေးနေမှုအခြေအနေများ၊ ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း IDP Camp များရှိစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူများနေရပ်သို့ ပြန်နိုင်ရေးအတွက် တပ်မတော်မှကချင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ ဘာသာရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ၊ သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်နေမှုနှင့်ဂျပန်နိုင်ငံမှ ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ကူညီဆောင်ရွက် ပေးမည့်ကိစ္စရပ်များ၊ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် လူသားချင်း စာနာထောက်ထားမှု ဆိုင်ရာများ အကူအညီပေးရေးအတွက် ဂျပန်နိုင်ငံမှဆောင်ရွက်နေမှု အခြေအနေများ၊ ရခိုင်ပြည်နယ် မြောက်ပိုင်း ဘူးသီးတောင်၊ မောင်တောဒေသတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ဘင်္ဂါလီအရေးကိစ္စများအား အစိုးရနှင့်တပ်မတော်မှဖြေရှင်း ဆောင်ရွက် နေမှုအခြေအနေများနှင့် နိုင်ငံတကာမှအမှန်အတိုင်းသိရှိနိုင်ရေး ဂျပန်နိုင်ငံမှကူညီ ဆောင်ရွက်ပေး နေသည့်အခြေအနေများ၊ မြန်မာနိုင်ငံတွင် နိုင်ငံရေးအရတည်ငြိမ် အေးချမ်းရေးနှင့် လုံခြုံရေးအရ တည်ငြိမ် အေးချမ်းရေးတို့အတွက် တပ်မတော်မှဆောင်ရွက် နေမှုအခြေအနေများ၊ မြန်မာနိုင်ငံတွင် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများရရှိစေရန်အတွက် ဂျပန်နိုင်ငံမှစက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများ လာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန် လိုအပ်မှု အခြေအနေများအား ရင်းရင်းနှီးနှီး အမြင်ချင်းဖလှယ်ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
တွေ့ဆုံပွဲအပြီးတွင် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့် ဂျပန်အစိုးရ၏ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးကိုယ်စား လှယ်နှင့် နီပွန်ဖောင်ဒေးရှင်းဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူတို့သည် တက်ရောက်လာကြသူများနှင့်အတူ အမှတ်တရစုပေါင်း ဓာတ်ပုံရိုက်ခဲ့ကြသည်။
တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျ ဂပြနျအစိုးရ၏ မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ အထူး ကိုယျစားလှယျနှငျ့ နီပှနျဖောငျဒေးရှငျးဥက်ကဋ်ဌ H.E. Mr. Yohei SASAKAWA အား လကျခံတှဆေုံ့
နပွေညျတျော၊ ဖဖေျောဝါရီ ၁၅
တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျသညျ ဂပြနျအစိုးရ၏ မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ အထူးကိုယျစားလှယျနှငျ့ နီပှနျဖောငျဒေးရှငျးဥက်ကဋ်ဌ H.E. Mr. Yohei SASAKAWA အား ယနမှေ့နျးလှဲပိုငျးတှငျ နပွေညျတျောရှိဘုရငျ့နောငျရိပျသာဧညျ့ခနျးမ ဆောငျ၌ လကျခံတှဆေုံ့သညျ။
အဆိုပါတှဆေုံ့ပှဲသို့ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့အတူ ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျရုံး(ကွညျး)မှ ဒုတိယ ဗိုလျခြုပျကွီး ဆနျးဦး၊ ဒုတိယဗိုလျခြုပျကွီး စိုးထှဋျနှငျ့ ဒုတိယ ဗိုလျခြုပျကွီး မောငျမောငျအေးတို့ တကျရောကျ ကွပွီး ဂပြနျအစိုးရ၏ မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ အထူးကိုယျစားလှယျနှငျ့ နီပှနျဖောငျဒေးရှငျးဥက်ကဋ်ဌဖွဈသူနှငျ့အတူ မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ ဂပြနျနိုငျငံသံအမတျကွီး H.E. Mr. Ichiro Maruyama နှငျ့ တာဝနျရှိသူမြား တကျရောကျ ကွသညျ။
ထိုသို့တှဆေုံ့ရာတှငျ မွနျမာနိုငျငံ၏ပွညျတှငျးငွိမျးခမျြးရေးရရှိရနျအတှကျ ဂပြနျနိုငျငံ မှ ပါဝငျကူညီဆောငျရှကျ ပေးနမှေုအခွအေနမြေား၊ ကခငျြပွညျနယျအတှငျး IDP Camp မြားရှိစဈဘေးရှောငျပွညျသူမြားနရေပျသို့ ပွနျနိုငျရေးအတှကျ တပျမတျောမှကခငျြပွညျနယျအတှငျးရှိ ဘာသာရေးဆိုငျရာအဖှဲ့အစညျးမြား၊ သကျဆိုငျရာ အဖှဲ့အစညျးမြားနှငျ့ ညှိနှိုငျး ဆောငျရှကျနမှေုနှငျ့ဂပြနျနိုငျငံမှ ဒသေဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျရေးအတှကျ ကူညီဆောငျရှကျ ပေးမညျ့ကိစ်စရပျမြား၊ ရခိုငျပွညျနယျအတှငျးဒသေဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျရေးနှငျ့ လူသားခငျြး စာနာထောကျထားမှု ဆိုငျရာမြား အကူအညီပေးရေးအတှကျ ဂပြနျနိုငျငံမှဆောငျရှကျနမှေု အခွအေနမြေား၊ ရခိုငျပွညျနယျ မွောကျပိုငျး ဘူးသီးတောငျ၊ မောငျတောဒသေတှငျ ဖွဈပှားခဲ့သညျ့ ဘင်ျဂါလီအရေးကိစ်စမြားအား အစိုးရနှငျ့တပျမတျောမှဖွရှေငျး ဆောငျရှကျ နမှေုအခွအေနမြေားနှငျ့ နိုငျငံတကာမှအမှနျအတိုငျးသိရှိနိုငျရေး ဂပြနျနိုငျငံမှကူညီ ဆောငျရှကျပေး နသေညျ့အခွအေနမြေား၊ မွနျမာနိုငျငံတှငျ နိုငျငံရေးအရတညျငွိမျ အေးခမျြးရေးနှငျ့ လုံခွုံရေးအရ တညျငွိမျ အေးခမျြးရေးတို့အတှကျ တပျမတျောမှဆောငျရှကျ နမှေုအခွအေနမြေား၊ မွနျမာနိုငျငံတှငျ အလုပျအကိုငျ အခှငျ့အလမျးမြားရရှိစရေနျအတှကျ ဂပြနျနိုငျငံမှစကျရုံ၊ အလုပျရုံမြား လာရောကျရငျးနှီးမွှုပျနှံရနျ လိုအပျမှု အခွအေနမြေားအား ရငျးရငျးနှီးနှီး အမွငျခငျြးဖလှယျဆှေးနှေးခဲ့ကွသညျ။
တှဆေုံ့ပှဲအပွီးတှငျ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့ ဂပြနျအစိုးရ၏ မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ အထူးကိုယျစား လှယျနှငျ့ နီပှနျဖောငျဒေးရှငျးဥက်ကဋ်ဌဖွဈသူတို့သညျ တကျရောကျလာကွသူမြားနှငျ့အတူ အမှတျတရစုပေါငျး ဓာတျပုံရိုကျခဲ့ကွသညျ။
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ဂျပန်နိုင်ငံ၊ Asahi Shimbun သတင်းဌာနအား လက်ခံတွေ့ဆုံပြီး မေးမြန်းမှုများအားဖြေကြား၊ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် မြန်မာ့တပ်မတော်နှင့် ထိုင်းဘုရင့်တပ်မတော်အကြား ဒုတိယအကြိမ်မြောက် ယဉ်ကျေးမှုဖလှယ်ခြင်း အစီအစဉ်အဖြစ် ထိုင်းဘုရင့်တပ်မတော် ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့ ဖျော်ဖြေပွဲအခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်ကြည့်ရှု (ရုပ်သံသတင်း)
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ဂျပန်အစိုးရ၏ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးကိုယ်စားလှယ်နှင့် နီပွန်ဖောင်ဒေးရှင်းဥက္ကဋ္ဌ H.E. Mr. Yohei SASAKAWA အား လက်ခံတွေ့ဆုံသည် (ရုပ်သံသတင်း)
သစ်ပင်များစိုက်ပျိုးခြင်းသည် ရာသီဥတုအားအထောက်အကူဖြစ်စေရန်၊ အရိပ်အာဝါသရရှိစေရန်၊ ရတနာတန်းဝင်နှစ်ရှည်သီးပင်စားပင်များအား ၀င်ငွေရစေရန် ရည်ရွယ်၍စိုက်ပျိုးနေခြင်းဖြစ်
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မဟာသရေစည်သူ မင်းအောင်လှိုင် ဘွဲ့ရအမျိုးသမီးဗိုလ်လောင်းသင်တန်း အမှတ်စဉ်(၅) သင်တန်းဆင်း ဂုဏ်ပြုစစ်ရေးပြအခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်
ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်များဖော်ဆောင်ရာ၌ NCA လမ်းကြောင်းပေါ်တွင်သာ လျှောက်လှမ်းရန်လို
စက်တင်ဘာ ၅၊ ၂၀၁၇ Admin 0
ဒီဇင်ဘာ ၈၊ ၂၀၁၉ Admin 0
နပွေညျတျော ၊ ဒီဇငျဘာ − ၈
ဒီဇင်ဘာ ၇၊ ၂၀၁၉ Admin 0
ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၉ (၁၅)
နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၉ (၄၄)
အောက်တိုဘာ ၂၀၁၉ (၆၇)
စက်တင်ဘာ ၂၀၁၉ (၅၉)
သြဂုတ် ၂၀၁၉ (၅၅)
ဇူလိုင် ၂၀၁၉ (၄၂)
ဇွန် ၂၀၁၉ (၄၃)
မေ ၂၀၁၉ (၃၆)
ဧပြီ ၂၀၁၉ (၇၄)
မတ် ၂၀၁၉ (၆၀)
ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၁၉ (၅၄)
ဇန်နဝါရီ ၂၀၁၉ (၅၄)
ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၉ (၆၉)
နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၉ (၁၇)
အောက်တိုဘာ ၂၀၁၉ (၂၇)
စက်တင်ဘာ ၂၀၁၉ (၂၉)
သြဂုတ် ၂၀၁၉ (၃၅)
ဇူလိုင် ၂၀၁၉ (၃၉)
ဇွန် ၂၀၁၉ (၂၈)
မေ ၂၀၁၉ (၃၃)
ဧပြီ ၂၀၁၉ (၃၅)
မတ် ၂၀၁၉ (၅၁)
ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၁၉ (၄၂)
ဇန်နဝါရီ ၂၀၁၉ (၄၄)
ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၉ (၄၈)
နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၉ (၄၁)
အောက်တိုဘာ ၂၀၁၉ (၃၇)
စက်တင်ဘာ ၂၀၁၉ (၂၇)
သြဂုတ် ၂၀၁၉ (၂)
မူပိုင် © ၂၀၁၉ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်.